Ilitye leScapolite-Uhlaziyo olutsha ngo-2021 -Ividiyo emnandi
Ilitye leScapolite. Ephuzi, engenambala, eluhlaza okwesibhakabhaka okanye emfusa i-scapolite gemstone.
Thenga i-scapolite yendalo kwivenkile yethu
Ii-scapolites liqela lezimbiwa ezenza ilitye elenziwe ngealuminium, ikhalsiyam, kunye nesodium silicate eneklorine, ikwacarbonate kunye nesulphate. Ezi zimbini zokugqibela ziyi-meionite kunye ne-marialite. USilvialite ukwalilungu elaziwayo leqela.
Eli qela ngumxube we-isomorphous we-meionite kunye ne-marialite endmembers. Amakristali e-tetragonal yi-hemihedral enobuso obufanayo, njenge-scheelite. Kwaye ngamanye amaxesha ubukhulu obukhulu. Zahlukile kwaye zihlala zinendlela yeekholamu zesikwere.
Ngaphaya koko, ezinye izinto ezicoca ulwalamano zihambelana nobuso beprism. Amakristali ahlala emhlophe okanye amhlophe-ngwevu kunye ne-opaque. Sifumene i-meionite njengamakristalu angenambala angenambala kwiibhloko zelitye lekalika IMonto Somma, Vesuvius. Ubunzima ngu-5 - 6. Kananjalo ubunzima obukhethekileyo buyahluka ngokwakhiwa kweekhemikhali phakathi kwe-2.7 (meionite) kunye ne-2.5 (marialite).
Amatye escapolite etyheli yendalo, angenambala, aluhlaza okwesibhakabhaka okanye omfusa anoxanduva lokutshintsha ngokweenkqubo zemozulu. Ngophuhliso lwe-mica, nayo i-kaolin, njl.njl.ukukhanya okuqhelekileyo kweekristali. Ngenxa yolu tshintsho. Kananjalo nakumahluko ekwakhiweni. Iindidi ezininzi ziye zahlulwa ngamagama akhethekileyo.
Eli litye liqhele ukuba yiminerali yemvelaphi yemetamorphic. Oku kwenzeka rhoqo kwiimabula zekristalline. Kodwa kunye ne-pyroxene kwii-schists kunye ne-gneisses. Iifrimu ezinde ezinde ezigcwele kwiimabhule zekristalline. Ngapha koko, ii-schists kwiiPyrenees zaziwa njenge-dipyre okanye i-couzeranite.
Amakristali amakhulu (i-wernerite) afumaneka kwiidipozithi zeapatite. Kummandla waseBamble kufutshane neBrevik eNorway. Ekugqibeleni iziphumo zivela kutshintsho lwe-plagioclase ye-gabbro.
Ngokwemvelaphi yabo amatye awela ngokwendalo ngokwamaqela amane:
Iimpawu zelitye kunye nonxibelelwano lwamatye e-metamorphic
Njengama-silicates atyebile kwi-calcium, kulindeleke ukuba ezi minerali zifumaneke apho ilitye lekalika elingcolileyo liye laqaqanjelwa ngokudibana ne-magneous magma.
I-Mafic igweous rock
Kwiindawo ezininzi ezinamatye, i-sapolite ithatha indawo ye-feldspar yinkqubo yesibini okanye ye-metasomatic.
Amabala amhlophe aphelele ngelixa imatriki emnyama ibasibekele iyindibaniselwano yophondo oluhlaza okomhlaza okanye omdaka ngombala.
Amatye e-Metamorphic of character gneissose
amabala amhlophe aphelele ngelixa imatriki emnyama ibasibekele iyindibaniselwano ye-hornblende eluhlaza okanye emdaka.
Intsingiselo yeScapolite kunye neepropathi zokuphilisa
Ilitye eliyigugu linentsingiselo kunye neempawu zokubuyisa ubomi bemihla ngemihla. Abantu bakholelwa ukuba inamandla okulungisa amandla angalunganga. Unokuba noxolo ngokunyanga uxinzelelo lwakho. Eli litye likwasetyenziselwa ukuphucula imikhwa emibi. Ingaphula imikhwa eyityhefu njengokutshaya, ukungcakaza, okanye ukutya kakhulu.
Isebenziselwa ntoni iscapolite?
Eli litye lisetyenziswa ikakhulu ngumqokeleli kunye nelitye elinqabileyo, ngakumbi kwimibala yalo etyheli nemfusa. I-scapolites yamehlo ekati ayasetyenziswa njengamatye anqabileyo amancinci kwaye anqumle kwii-cabochons. Iindidi ze-opaque yellow fluorescent ezichazwe apha ngasentla ngamanye amaxesha zisetyenziswa njengelitye eliyigugu kwaye ubukhulu becala zinqunqwe zaba zii-cabochons.
Ifunyanwa phi i-scapolite eblue?
I-scapolite etyheli, engenambala, eluhlaza okwesibhakabhaka okanye emfusa ifumaneka kwingingqi yemarble eMogok, eMyanmar, kunye namakristali aphuzi aphuzi avela eTanzania kwiiNduli zaseMerelani, eArusha; kwaye eMorogoro, Uruguru.
Ngaba i-scapolite inokunyangwa ngobushushu?
Ayinyangeki okanye inyuselwe nangayiphi na indlela, kodwa amanye amatye anemibala ye-lavender ayaziwa ukuba aphathwa ubushushu okanye akhanyiswa. Amatye anyangiweyo ayaziwa ukuba apheliswe kukukhanya nobushushu.
I-Scapolite phantsi kwemicroscope
I-scapolite yendalo iyathengiswa kwivenkile yethu yegem
Senza isacholo se-scapolite jewelry njengemisesane yokuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.